Firefox 99 inosvika nekuvandudzwa kweLinux, Wayland, nezvimwe | Linux Addicts
Firefox 99 inosvika nekuvandudzwa kweLinux, Wayland, nezvimwe
Darkcrizt | 06/04/2022 01:10 | Zvirongwa
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro itsva yeFirefox 99 kwakaziviswa pamwe chete ne "Firefox 91.8.0" yenguva refu yebazi yekuvandudza. Kuwedzera kune hutsva uye kugadzirisa kwebug, Firefox 99 inogadzirisa makumi matatu kusasimba, ayo makumi mapfumbamwe akanyorwa seane ngozi. 30 kusasimba (9 yakapfupikiswa muCVE-24-21 uye CVE-2022-28288) inokonzerwa nenyaya dzekurangarira, senge buffer mafashama uye kuwana kune dzakatosunungurwa ndangariro nzvimbo.
Iyo beta vhezheni ye Firefox 100 inosuma kugona kushandisa maduramazwi emitauro yakasiyana panguva imwe chete uchitarisa chiperengo, paLinux neWindows vane mipumburu inoyangarara inogoneswa nekusarudzika. Mufananidzo-mu-Mufananidzo modhi inopa zvinyorwa zvidiki kana uchiona mavhidhiyo kubva kuYouTube, Prime Vhidhiyo, uye Netflix. Webhu MIDI API inogoneswa.
1 Zvitsva zvikuru Firefox 99
Zvitsva zvikuru Firefox 99
Iyi vhezheni itsva yeFirefox 99 inosimbisa izvozvo yakawedzera tsigiro yemamenu echinyakare GTK. Iyo ficha inogoneswa kuburikidza ne "widget.gtk.native-context-menus" kuseta mune nezve:config.
Chimwe chitsva ndechekuti yakawedzera kuyerera kweGTK scrollbar (yakazara scroll bar inoonekwa chete kana mbeva cursor ichitenderedzwa, zvikasadaro nechero kufamba kwembeva mutsara wakatetepa wechiratidzo unoratidzwa uchibvumira kunzwisiswa kwemupumburu wazvino pane peji, asi kana chitubu chikasafamba, chiratidzo chinonyangarika mushure mechinguva) . Izvozvi zvakavharwa nekusarudzika, iyo widget.gtk.overlay-scrollbars.enabled set inopihwa nezve:config kuti igone kuigonesa.
Zvakare, muFirefox 99 yakasimbiswa sandbox yekuzviparadzanisa inomira pachena paLinux: Maitiro anopa webhu kugadziridzwa anorambidzwa kuwana iyo X11 server, uye zvakare akagadzirisa dzimwe nyaya dzakaitika pakushandisa Wayland. Kunyanya, nyaya ine tambo yekuvhara yakagadziriswa, iyo popup scale yakagadziridzwa, uye mamiriro emukati akagoneswa kana uchitarisa chiperengo.
En Android inopa mukana wekudzima makuki uye data yemuno yakachengetwa zvakasarudzwa chete kune imwe nzvimbo uye yakagadzirisa kuparara kwakaitika mushure mekushandura kubrowser kubva kune imwe app, kuisa update, kana kuvhura mudziyo.
Of the dzimwe shanduko izvo zvinomira kunze kweiyi vhezheni itsva yeFirefox 99:
Yakawedzera navigator.pdfViewerEnabled property, iyo web application inogona kuona kana browser ine yakavakirwa-mukati kugona kuratidza mapepa ePDF.
Yakawedzera hotkey 'n' kuReaderMode kugonesa/kudzima Narrate mode.
Iyo yakavakirwa-mukati PDF yekuona inopa rutsigiro rwekutsvaga ine kana isina diacritics.
Yakawedzerwa tsigiro yeRTCPeerConnection.setConfiguration() nzira, iyo inobvumira masaiti kugadzirisa WebRTC marongero zvichienderana netiweki yekubatanidza paramita, shandura ICE sevha inoshandiswa pakubatanidza, uye mitemo yekufambisa data inoshandiswa.
Yakaremara nekusarudzika ndeye network ruzivo API, kuburikidza iyo yaikwanisika kuwana ruzivo nezve yazvino yekubatanidza (somuenzaniso, mhando (cellular, bluetooth, ethernet, wifi) uye kumhanya).
Chekupedzisira, zvakakodzera kuti titaure kuti bazi reFirefox 100 rakaendeswa kunoyedzwa beta uye kuburitswa kwaro kwakarongerwa Chivabvu 3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 99 inosvika nekuvandudzwa kweLinux, Wayland, nezvimwe
Chinhu chikuru ndechekuti vakagadzirisa kusawirirana neffmpeg 5.0, saka ikozvino unogona kuona mavhidhiyo pasina kuve ne ffmpeg4.4 yakaiswa panguva imwe chete.
Unreal Injini 5 inouya nekuvandudzwa kwakawanda kweVulkan neLinux
Canonical inoputsa hukama nevadyidzani veRussia uye vashandisi vemakambani